Fotoana famakiana: 3 minitra Ho an'ireo tsy fantany efa, Black Forest dia faritra be ala any atsimo andrefan'i Alemana. More manokana, Izany dia midika hoe miorina ao amin'ny fanjakan'i Baden-Württemberg, ary mitana anjara manan-danja izany. Ary, ny faritra eo amin'ny sisin-tanin'i Frantsa sy Soisa, ka azo idirana…
Fotoana famakiana: 5 minitra Luxembourg City dia mahagaga mitambatra ny fahiny sy ny ankehitriny miaraka amin'ny an-toerana sy iraisam-, tsotra sy mihaja. Tena azo antoka ny milaza fa amin'ny ekilekitika ireo safidy rehetra, tsy misy fahafahana Te leo anao. Izany no antony nahasarotanay ny nanonona ny Top ihany…
Fotoana famakiana: 3 minitra Alemaina dia firenena mazava ho tsara tarehy. Fa rehefa anao hieritreritra lapa, no ho tia azy bebe kokoa. Ary izany rehetra izany, satria Alemaina no, araka ny maro, ny lapa renivohitry ny izao tontolo izao. Misy trano maro mahatalanjona ao Alemana…
Fotoana famakiana: 4 minitra Raha ela mba hahita ny sasany amin'ireo Eoropa ny fitsidihana tsy maintsy-toerana, vitsivitsy ny bisikileta indrindra tanàna namana dia azo antoka fa hahatonga ny lisitra. Ireo tanàna dia lehibe mba hijery ny bisikileta, manao azy ireo tsara ny mandeha amin'ny teti-bola. Ary afaka mankany ianao amin'ny…
Train Travel Austria, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, ...
Fotoana famakiana: 4 minitra New traikefa no antony tsara lavitra. Na izany aza, indraindray ny mpizaha tany fahitana-namana tsy afaka hanao labozia ny tsena spree, na dia miavaka. Ny olona izay mitsidika ny lisitry ny mahafantatra izany, ary soa ihany fa be ny tanàna any Eropa izay ahafahan'izy ireo mamoaka…
Fotoana famakiana: 5 minitra Winter no fotoana tsara indrindra mba hanorenana firefodrefotry afo, soa aman-tsara namely ny tehezan-tendrombohitra, hanorina snowmen ary snuggle miaraka mahafinaritra dite. Indrisy, fa tsy izay mahafinaritra sy lalao. Winter ihany koa ny mamorona ny sasany amin'ireo lalana mamitaka indrindra ny toe-piainana. Satria tsy azo atao izany…
Fotoana famakiana: 4 minitra Raha izay tadiavinao ho afa-mandositra ny ambony yoga, retreats any Eoropa noho ny vakansy manaraka, ianao in vintana. Ny sasany amin'ireo firenena Eoropeana tsara tarehy indrindra voky hanatitra raha ny amin'ny ny yoga sy ny fialam-boly. Na dia India aza no heverina ho be indrindra…